Soomaaliya oo ugu horeysa wadamada ugu musuqa badan caalamka
Soomaaliya ayaa safka hor ka gashay wadamada ugu musuq maasuqa badan dunnidaan sida lagu sheegay warbixin sanadeed ay diyaarisay hay’adda la yiraahdo Transparency International oo arrimaha musuqa u kuur gasha.
Warbixintaan oo laga diyaariyay dhawr wadan oo dunnidaan ku taala ayaa sanadkaan gabo gabada ah laga helay mus maasuq inay ku kaceen kuwaasoo dalalka ugu horeeya ay Soomaaliya ku jirto.
Warbixintaan ay hay’addaan diyaarisay waxay ku sheegtay in dawladaha liiska ku jira oo gaaraya 52 wadan ay ku sifoobeen ku dhaqanka musuq maasuqa isla markaana ay hanta guud ku takri faleen.
Agaasimaha maamulka hay’adda Transparency International Cobus de Sward ayaa sheegay in warbixintooda ay ku sheegeen in wadamada ugu musuqa badan sanadkaan ay ugu horeeyaan Soomaaliya Waqooyiga Kuuriya iyo Afghanistan halka liiska ay ku jiraan wadamo qaaradda Yurub ku yaala.
Cobus de Sward waxaa uu u sheegayqaar ka mid ah wakaaladaha wararka ee dunida in xogtaan ay ku ogaadeen kadib baaritaano ay sanadkaan sameeyeen.
“Warbixinta waxaa sal u ah baaritaano aynu sameynay waana wax loo baahan yahay in laga hor tago musuqa iyo wax is daba marinta” ayuu yiri Cobus de Sward oo ah agaasimaha hay’adda warbixintaan diyaarisay.
Dawladaha wadamo ay ka mid yihiin Denmark, Finland, and New Zealand ayaa warbixinta lagu sheegay in laga helay musuq maasuq hase ahaa ma gaarsiisana heerka wadamada hore ee Soomaaliya ka mid tahy.
Soomaaliya dhawr jeer ayaa lagu daray liiska wadamada dunnida ugu musuq maasuqa badan hase ahaatee dawladihii Soomaaliya soo maray waa ay iska fogeeyeen inay wax musuq maasuqaan.